Nkedo plastik na Igwe Ngwunye Igwe
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi na itinye n'ọkwa kpo oku chọrọ tupu ikpo ọkụ nke ebu na ọnọdụ dị elu karị, iji hụ na ọfụma kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ihe nkedo-ịkpụzi. Heatingzọ kpo oku a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ahụ bụ uzuoku ma ọ bụ kpo oku na-eguzogide ọgwụ, mana ha dị imerime, adịghị arụ ọrụ, na ndị a na-apụghị ịdabere na ha. Ngwunye ọkụ bụ ihe ọzọ dị ọcha, ngwa ngwa na ike-arụ ọrụ nke a na-eji ọtụtụ ebe na afọ ndị na-adịbeghị anya iji dochie uzuoku, gas ma ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ nke ihe na-egbu.
Gịnị bụ Ọgwụ na ịkpụzi?
Moldkpụzi nkedo plastik na kpo oku na-ekpo ọkụ bụ usoro agbaze plastik plasti (thermosetting / thermoplastic polymers) nke nwere ike ịkpụzi ngwa ngwa, na-agbanye nrụgide n'ime oghere ebu, nke jupụtara na iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ.
Olee Otú Plastic Ọgwụ na ịkpụzi Work?
Usoro nkedo nkedo plastik na Protolabs bụ usoro ọkọlọtọ metụtara ebu aluminom. Aluminom na-enyefe ikpo ọkụ nke ọma karịa nchara, ya mere, anaghị achọ ọwa dị jụụ - nke pụtara na oge anyị na-echekwa na jụrụ oyi nwere ike itinye n'ọrụ na nlekota njuju, nchegbu ịchọ mma na ịmịpụta akụkụ dị mma.
A na-ebuba mkpụrụ osisi resin n'ime gbọmgbọm ebe ha ga-emesị gbazee, gbakọọ, ma gbanye ha n'ime sistem nke mould. A na-agba resin na-ekpo ọkụ n'ime oghere ebu site n'ọnụ ụzọ ámá na akụkụ ya. Ejector atụdo ikwado mwepụ nke akụkụ si ebu ebe ọ dara n'ime a loading bin. Mgbe ọsọ ahụ zuru, akụkụ (ma ọ bụ nke mbụ na-agba ọsọ) na-akụ ma ziga obere oge mgbe nke ahụ gasịrị.
Kedu ka esi eji kpoo ọkụ ọkụ na Dies & Molds Industry?
Itinye n'ọkwa Preheating nke ngwa ọrụ na ebu maka ịkpụzi ọgwụ na rọba
Gba egwu nke ngwaọrụ ịkpụzi maka ịgwọ ngwaahịa roba na taya ụgbọala
Anwụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka ịmepụta catheter na n'ichepụta ngwaahịa ọgwụ
Die na platen kpo oku maka metal zọ na-akpụ
Itinye n'ọkwa Preheating nke nkedo Ebu na metal mgbatị ụlọ ọrụ
Itinye n'ọkwa Okpomọkụ na-emeso ma sie ike nke stampụ na ọkpọ ọkpọ ma nwụọ
Categories Induction kpo oku PDF, Technologies Tags IH Plastic Ọgwụ na ịkpụzi, ịkụnye ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, Inctioning Injection Molding, induction injection ịkpụzi okpomọkụ, itinye n'ọdụ Plastic Ọgwụ na ịkpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi, Ingkpụzi Ihe Nrọ Ala Ahụ, Plastic Ọgwụ na ịkpụzi, Plastic Ọgwụ na ịkpụzi Heater, Plastic Ọgwụ na ịkpụzi igwe, Plastic Ọgwụ na ịkpụzi System, Gịnị bụ Ọgwụ na ịkpụzi Mail igodo
Itinye n'ọkwa Annealing Brass Bullet Shells